Soo dejisan FL Studio 12.3 – Vessoft
Soo dejisan FL Studio
FL Studio – software ah oo awood leh si ay u abuuraan iyo edit music. software wuu awoodaa inuu ku fuliyo hawlahan aasaasiga ah iyo xirfadeed ee editor maqal ah, sida beeraha, koobiyeynta, midab beddelo, goobaha laxanka, dhawaaqaysa gacanta duration, iwm FL Studio taageertaa qaabab badan oo maqal ah oo u saamaxaaya in ay soo rogaan kala duwan ee saamaynta dhawaaqa on waxay kuwan raadkaygay maqal ah halka lagu qoro. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan mashaariic music la isticmaalayo baarka jira iyo alaabtii muusikada kala duwan. FL Studio waa awoodaa inuu ballaariyo fursadaha ay u gaar ah taasi oo ka daro kala duwan oo la xidhiidha of plugin ku VST caan ah.
set A qalabka aasaasiga ah iyo xirfad
saamaynta badan oo sanqadha
The emulators dhisay-in ka mid ah alaabtii muusikada
Taageerada heerarka daro casri ah
FL Studio Software la xiriira:
Українська, Français, Español, Deutsch... Virtual DJ 8.2.3440 iyo 7.4.7
العربية, English, Français, Español... Reaper 5.27